DAAWO: Haweenay soo duubtey muuqaal cabsi leh jeer ay dhex mareeysay dusmo wada holcaysa! (Ma badbaaddey?!) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Haweenay soo duubtey muuqaal cabsi leh jeer ay dhex mareeysay dusmo...
DAAWO: Haweenay soo duubtey muuqaal cabsi leh jeer ay dhex mareeysay dusmo wada holcaysa! (Ma badbaaddey?!)
(Malibu) 20 Nof 2018 – Muuqaal murcib ah oo naxdin badan ayaa waxaa iska duubtay haweenay dab dambaaburo tuuraya ku dhex kaxaynaysa gaarigeeda si ay uga baxsato dabka laayaanka ah ee California.
Rebecca Hackett, oo ku nool taagga Agoura Hills, ayaa xilligaa nolosheeda ka quusatay, iyadoo dhex maraysay dabka Woolsey Fire iyadoo ku joogta Kanan Road oo mara magaalada laga kala cararay ee ay taajirku degaan ee Malibu.
Haweenaydan ayaa bun ku baxsatay iyadoo kasoo dhaqaaqday White Cloud Ranch, oo uu ugu yaallo goof ay fardaha ku dhaqdo kaasoo u dhow Malibu. Waxaa la maqlayaa iyadoo dhex mareeysa dhuxulo dab ah iyo codkeeda oo ku celcelinaya. ”Ilaahow tan iga bixi!”
Previous articleWax kasta oo aad uga baahan tahay 4-ta xul ee iskugu haray Nations League (Goorta & goobta ay ku ciyaarayaan)
Next articleDHEGEYSO: Wasiir Bayle oo ka jawaabey eedayn ”musuq” oo ka timid Guddiga Maaliyadda ee Baarlamanka